Oduu Amma nu Gahe! Har’aa Ebla16/19 InjifannooWBO! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Amma nu Gahe! Har’aa Ebla16/19 InjifannooWBO!
ODUU AMMA NU GAHE! #Oduu_Injifannoo_WBOKO! WBOn gumaa ummata Oromoo baasuu itti fufeera!Guyyaa har’aa Ebla 16, 2019 Wbon Seenaa ddaa galmeesseera! Baga Gammaddan!● #Zoonii_Kibbaa Guyyaa har’aa lola imaa RIP fi WBO gidduutti Iddoo #Kalaaltuujadhamtuutti godhameen Loltoota Diinaarra 86 ol daaraa taateetti jirti. 20 ol madoo 4 booji’amte! Qabeenyi diinaa Ooraaliin 1 daaraa taateetti! Gara meeshaatiin
#Boonbii__589! RIP Irraa Booji’uun galii Waraana bilisummaa Oromoo (WBO) ta’eera! JAAL GOOLLICHAAN AJAJAAN ZOONII KIBBAA SEENAA HOJJACHAA JIRA! Yoom kana qofa!
#WBOn_Zoonii_Lixaa guyyaa har’aa Qondaala RIB kan yeroo darbe daangaa #Eertira irraa loltuu kumaatamaan dachaasee Lixatti duule fi hanga daangaa #Sudaan_kibbaatti itti gaafatamummaan itti kenname #TO‘ANNOO Wbo Jala galeera! #Jaal_Marroon ajajaan Zoonii lixaa Seenaa addaa hojjachaa jira! Dr, Ashaagiree (Abiy Ahmed) Fi Garee ATM Nafxanyicha keessan akka hin barbaanne! Harka Wbo jira! Harka Leenca fakkii
Nama #Jaal_Marroo_harka jira!
Wbon Biyya isaa Oromiyaa bilisoomsuuf kutatee falmaa finiinsee Diina haleelaa jira! Qeerroon Bilisummaa oromoo bakka hundaan waraana keessan WBO bira dhaabbachuuf Qophaayi.UUmmaatni keenya kan Bahaa, Lixaa, Kaabaa, Kibbaa WBO Bira haa dhaabbannuu! Abbaan fadhees haa wixifatuu malee Abadan WBOn Oromiyaa ni walaboomsa!Injifannoo Boonsaa guyyaa har’aa waraanni keessan galmeesse kana Jaalattootaafi deefartoonni ABO/WBO Addawwiin Ummata Oromoo Shishiim!!
WBOn barabaraan haa jiraatuu!Oromoo ABO/WBO Jabeessaa! Injifannoon kan Uummata Oromooti!
Amma jaroni kuni angoo irraa jiiranitii Oromiyaan naga argata jeetani hin-yadinna . hundi sani diqala dha
Rakko Oromo tokko birraa injiirani. Amma’mo kuno #WBO lafa irraa baleesuu dhaf karoorraa bafatani kuno summi dhan #ABO waan godhan xoolayiti araga jirraa . Qeerroon Oromiyaa hundi yeroo gababati waan kana irrati waali galee jarota 4n kana akka OPDOn angoo irraa kastuu gafacuun dirqama .
Taha’u banan Qabsoon keenya cimmee akka itifufu gafana. Amboo Qeerroo waan kana irrati siriti yaduu qaba dafee. Qeerroon Walisoo kuno guyaa lamaafi itifufee jirraa . Qeerroo Walisoo galatomaa !!!
OPDO must go !
OMN Jabeessuuf abbaan qabeenya yuuniversitii …..